कर्णसँग अन्तरवार्ताः फोरम संघीय सरकारमा जानु उपयुक्त थिएन | Latest news of Nepal,world news, articles, literature, Business news, Entertainment and more
कर्णसँग अन्तरवार्ताः फोरम संघीय सरकारमा जानु उपयुक्त थिएन
जेठ १९ गते, २०७५ - ०७:१४
संघीय समाजवादी फोरमको संघीय सरकारमा सत्तारोहणलाई कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ ?
संविधान संशोधन मधेसको मुख्य एजेन्डा हो । त्यो एजेन्डा पूरा गर्न राजपा र फोरमलाई जनताले निर्वाचनमार्फत म्यान्डेट दिएका हुन् । त्यो एजेन्डामा प्रतिबद्ध हुनु दलहरूको दायित्व हो । सत्ताका लागि दुवै दललाई जनताको म्यान्डेट थिएन । उनीहरूको म्यान्डेट भनेको संविधान संशोधन र अधिकार प्राप्तिका लागि संघर्ष नै हो ।
तर, फोरमले संघीय सरकारमा सामेल हुन पहिले नै निर्णय गरेको थियो नि ?
अाजको नयाँ पत्रिकामा छापिएको छ-हो, फोरमले आधिकारिक रूपमा निर्णय गरेर भनेको थियो कि सरकारमा सहभागी हुने । नेकपासँग अहिले सहमति भए पनि निर्णय पहिला नै भएकाले यो फोरमको नयाँ कदम होइन । त्यसरी हेर्न पनि हुँदैन । पहिला एमाले र माओवादीसँग औपचारिक रूपमा संविधान संशोधनको विषयमा सहमति जुटेको थिएन । सहमति जुटेको भए एमाले र माओवादीका अन्य नेताहरूसँगै सरकारमा जाने तयारी थियो ।
कतिपयले अब प्रदेश २ मा समीकरणमाथि प्रश्न उठाएका छन् नि ?
यो प्रश्न राजनीतिक वृत्तमा चर्चाको विषय बनेको छ । तर, मलाई लाग्छ तत्काल प्रदेश २ को सरकार परितर्वन हुँदैन । र, संघीय समाजवादी फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले अहिले सरकार परितर्वनको कुनै संकेत पनि गर्नुभएको छैन । त्यसकारण, अहिले नै केही भन्न सकिँदैन सरकार परिवर्तनका बारेमा । फोरमले संघीय सरकारमा सहभागी हुने निर्णय गरेपछि प्रदेश २ मा सरकार बनेको हो । निर्वाचनमै निर्वाचन क्षेत्र भागवन्डा गरेका कारण त्यो निर्वाचनको मताधिकारको सम्मानको कुरा पनि हुन्छ ।
भनेपछि सहमतिमै फोरम संघीय सरकारमा सहभागी भएको हो ?
होइन, राजपालाई फोरम संघीय सरकारमा जान्छ भन्ने जानकारी थियो । र, त्यसैअनुसार पहिले सहमति भएका थिए । तर, अहिले राजपाले प्रदेश २ मा सरकार छोड्छ होला भन्ने लाग्दैन । राजपाले समर्थन फिर्ता नलिएसम्म प्रदेश २ को सरकार ढल्ने अवस्था छैन । राजपा र फोरमबीच तत्कालको मतभिन्नताले सरकार
परिवर्तन हुँदैन ।
फोरमले संविधान संशोधनमा सहमति गरेर सरकारमा गएको छ, संविधान संशोधन हुने सम्भावना छ?
संविधान संशोधनको मुद्दा निकै जटिल छ । प्रधानमन्त्री केपी ओली विगतमा संविधान संशोधन गर्न नहुने पक्षमा थिए । त्यसकारण, मलाई त्यति धेरै विश्वास छैन । संशोधन भइदियो भने त गज्जब हुन्छ । तर, तत्काल सम्भव देखेको छैन । मधेसी, जनजातिका माग संसद्बाट परिवर्तन हुन्छ होला भन्ने मलाई विश्वास छैन ।
भोलिका दिनमा राजपा पनि कुनै रूपमा सरकारमा जाने सम्भावना छ ?
राजपाका नेताहरूले संविधान संशोधन नभएसम्म सरकारमा नजाने बताइरहेका छन् । अहिलैकै अवस्थामा पनि सरकारमा जाने सम्भावना त कसरी हुन्छ र ? उसले संविधान संशोधनको कुरा गरेको छ । त्यसपछि रेशम चौधरीको कुरा पनि निकालेको छ । चौधरीलाई शपथ ग्रहण गराउनुपर्ने राजपाको माग सम्बोधन भएको छैन । बालकृष्ण ढुंगेललाई आममाफी दिएर निकालियो, तर चौधरीको कुरा अगाडि बढेन ।
तर, महन्थ ठाकुरलाई सभामुख बनाउने हल्ला पनि छ नि ?
नेकपाले महन्थ ठाकुरलाई किन सभामुख दिन्छ ? यो नै मुख्य प्रश्न हो । ठाकुर केही हुन्छन् भन्ने लाग्दैन । ठाकुरजीले मलाई भन्नुभएको थियो कि जुन दिन कांग्रेसलाई छाडेर आएँ, त्यही दिनदेखि पद छाडेर आएको हुँ । त्यसकारण ठाकुरजी सजिलै मानेर जानुहोला भन्ने लाग्दैन । र, नेकपाले दिन्छजस्तो पनि लाग्दैन ।
भनेपछि तपाईंको बुझाइमा फोरमको अहिलेको सत्तारोहण ठीक थिएन ?
संघीय समाजवादी फोरम मधेसका लागि भए पनि अहिले सरकारमा जानु उपयुक्त थिएन ।
के हुन्छ प्रदेश २ को सरकार ? उपेन्द्रको एक तीरले दुई सिकार
जेठ १९ गते, २०७५ - ०७:१४ मा प्रकाशित